SAWIRRO-Jubbaland oo bilawday howlgal kadhan ah ururka Alshabaab. – Radio Daljir
SAWIRRO-Jubbaland oo bilawday howlgal kadhan ah ururka Alshabaab.
Diseembar 27, 2016 4:15 b 0
Ciidamada Dowladda Jubbaland ayaa bilaabay duulaankii ugu danbeeyay oo loogu gurmanayo dadka Xoolo dhaqatada ah ee Gobolka Jubada Hoose oo ay dhibaato adag ku hayaan Kooxda Nabad diidka ah ee Al-Shabaab .
Madaxweynaha Jubbaland ahna Taliyaha guud ee Ciidamada qalabka sida ayaa amar ku bixiyay in Cutubyo katirsan Ciidamada qalabka sida loo diro deeganada Galbeedka Jubada Hoose halkaas oo dagaalo ay maalmahan ku dhex marayeen Dadka deeganka oo la hubeeyay iyo Kooxda Al-Shabaab.
Cutubyadii ugu Horeeyay ee katirsan Ciidamada qalabka sida ayaa shalay gaaray deeganada ay maalmahii lasoo dhaafay dadka deeganku kula dagaalamayeen Al-Shabaab si ay u garab istaagan oo ay u kala eryaan Kooxda beegsanaya Dadka Shacabka ah ee aan waxba galabsan.
Hawlgalkan oo looga gol leeyahay in Dadka deeganka laga dul qaado dhibaatada adage e ay ku hayaan Argagixisadu ayaa la qorsheeyay in uu gaadho ilaa Gobolka Jubada Dhexe halkaas oo ay Argagixisadu mudo badan hayato Dadka deegankana ay dhib badan ku hayaan.
Kooxda Al-Shabaab ayaa in ka badan 2 kun oo xoolo nool ah gaar ahaan Geel waxaa ay ka dheceen Dadka Xoolo dhaqatada ah eek u nool Jubada Hoose taas oo sababtay in Dowladu ay hubayso dadka reer miyiga ah si ay isaga Difaacan cadawga hororka ah waxaana muuqata in Dadka deeganka iyo Ciidamada qalabka sida oo is kaashanaya in ay soo dhiciyeen tiro badan oo kamid ah xoolaha ay Nabad diidku dheceen.
DHEGEYSO-Sheekh Maxamuud X Yuusuf oo kadigey xuska ciida Kirismaska.